कोरोना निय`न्त्रण गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र`की नातिनी पूर्णि`काले दिइन् सरकारलाई यी ५ सुझाव – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/कोरोना निय`न्त्रण गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र`की नातिनी पूर्णि`काले दिइन् सरकारलाई यी ५ सुझाव
कोरोना निय`न्त्रण गर्नको लागि ज्ञानेन्द्र`की नातिनी पूर्णि`काले दिइन् सरकारलाई यी ५ सुझाव
नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई ५ सुझाव । यसरी काम गरे धेरैमा ३ महिनामा पूर्ण नियन्त्रण आउनेछ ।
१) भारतिय सिमामा भएका / विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरुलाई अविलम्ब कोरोना test गर्दै छिराउनुहोस । जसको positive आउँछ वहाँहरुलाई उतै देशमा राजदुतावासको सहयोगमा उपचार हुने ब्यवस्था मिलाउनुहोस । यसो हुँदा लुकिछिपी सिमा पार गरेर कोहिपनि आउने छैनन र track गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
२) हस्पिटलका डाक्टर ,नर्स, एम्बुलेन्स चालक , कर्मचारीहरुको कोरोना test गर्नुहोस र त्यहाँ भर्ना भएका सबै बिरामीहरुको कोरोना test गर्नुहोस । प्रत्येक हस्पिटलमा कर्मचारी र डाक्टरको test गराईसकेपछी शुल्क लिएर नै भएपनि उक्त हस्पिटलमा आउने नयाँ बिरामिलाई gate मै corona test गराउने ब्यवस्था गराउनुहोस । यसो गर्दा हस्पिटलबाट आगामी दिनमा कोरोना फैलने छैन ।
३) चोक चोकमा भएका पसल , मार्ट , डेरि , बेकरी , कपडा पसल, मेडिकल आदि जस्ता भीड हुने ठाउँका ब्यापारीको र त्यहाँ सामान ओसार्ने ढुवानिकर्ताहरुको कोरोना टेस्ट गराउनुहोस । त्यसपछी पसल / पसलमा पनि सामान किन्न आउनेलाई rapid test kit को ब्यवस्था गर्नुहोस । पसलमा सामान किन्न आउने नयाँ ग्राहकलाई अनिवार्य rapid test गराउनुहोस र प्रत्येक १५ दिनमा फेरि repeat गर्नुहोस । सामान किन्न आउँदा कोरोना रिपोर्ट negative भएको प्रमाण चाहिने ब्यवस्था गर्नुहोस ।यसो गर्दा बजारबाट र भीडभाड स्थलबाट कोरोना फैलने छैन
४) त्यत्रा प्रदेश, वडा, नगर, गाविस बनाउनुभएको छ । अरबौ खर्च हुनेगरि तलब र भत्ता खुवाएर वडामा सदस्य र अधक्ष भर्ती गरिएको छ । एउटा वडाबाट अर्को वडामा समेत जान नमिल्ने गरि पूर्ण रुपमा वडा – वडा सिल गर्नुहोस । यसो गर्दा एउटा वडाबाट अर्को वडामा कोरोना फैलने छैन ।
५) त्यसपछिको चरणमा एक घर एक ब्यक्तिको test गराउनुहोस । त्यसो हुँदा कुन घर सुरक्षित छ र कुन घर सुरक्षित छैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ ! यदि यती ५ काम गर्न सक्नुभयो भने सम्भावीत कोरोना संक्रमीतहरु सबै tracking हुन्छन । कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रम पनि रोक्किने छ । धेरैमा ३ महिना भित्रमा कोरोना संक्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउने छ ।
यहाँनेर एउटा प्रश्न आउनसक्छ । त्यत्रो test गर्नको लागि kit कहाँबाट ल्याउने ? त्यसको लागि पहिले आवश्यक रकम राज्यकोषबाट , सहयोगबाट र केही सीप नलागे जनताबाट पनि उठाउन सकिन्छ ।त्यसो हुँदा मात्र यो लक डाउन सफल हुन्छ । नत्र, लक डाउन भनेर जनता थुनिरहने । उता भुसमा आगो सल्किएको जसरी आगो सल्किइरहने हुन्छ । सरकार त पूर्ण रुपमा असफल हुने नै छ त्यो भन्दा ठूलो कुरा प्यारा जनताहरुले प्राण गुमाउनुपर्ने छ ।
यी विषय अविलम्ब लागू गर्नुहोस सरकार । हामिले कोरोना नियन्त्रणको लागि भारतको हैन दक्षिण कोरियाको तरिका अपनाउनु पर्छ । भारतले लक डाउन बढाए यता पनि बढाउने , उता खोल्यो भने यता पनि खोल्ने , उता खुकुलो बनाउदा यता पनि खुकुलो बनाउने गरेर नेपालमा नियन्त्रण हुँदैन ।
सज्जा चौलागाईले नेपाल आईडल जितेपछि रचना रिमालले यस्तो भनिन । आईडलभित्र कस्लाई कोरोना लागेको हो ? रचना बोलिन् (भिडियो हेर्नुस)
कालापानी नेपाल र भारत बीचको विवा`द हो, चीन नेपालको पक्षमा उभिन्छ –( राज`दूत यान्छी )
मोटो र भद्धा भएर चिन्तित हुनुहुन्छ कि ? स्लीम बन्न अपनाउनुस् यी उपाय
राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गायक प’क्राउ, गायक मात्र हैन गिरोह नै छ भन्दै सगर थापाको आ’क्रोश (भिडियो)